Nke kacha ere 15 agba anya ihu kaadiboodu mix etemeete mara mma ahaziri palette.
Nke mbụ ：15 Agba Paịlị Eyeshadow, gụnyere Glitter, Matte, Shimmer, Mettallic, Eyeshadows Iridescent. Ọgaranya maka nhọrọ.
Igwe nkpuchi anya a nwere ụdị nku anya anya 15 dị mma maka ụbọchị ma ọ bụ egwuregwu. Jiri ihunanya anya gi jiri ikiri okike nke gi obi ike ma obu ihu oma kariri nke kwesiri ka emee.
Abụọ mbụ:Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta nke onyinyo anya. Ogo nke ngwaahịa anyị nwere ike iji ya tụnyere ọtụtụ nnukwu ụdị, ọbụlagodi ka mma. Biko nwee obi ike ịzụta ngwaahịa anyị. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na ngwaahịa ndị a natara, anyị ga-anọ n'ọrụ gị n'oge ọ bụla.
Nke mbụ:Ukwuu Pigmented Eyeshadow Palette, ntụ ntụ dị mma ma baa ọgaranya na ink. Ọ dị mfe ịgwakọta na Ogologo oge. Debe ihe etemeete gị ụbọchị niile.
High Quality Eye Shadow Powder: Anyị ọkachamara eyeshadow palette ntụ ntụ dị nro ma dị elu nke ukwuu, mmiri na-egbochi, magburu onwe ya ductility, ike adhesion. Eyeshadow mfe oyi akwa na ngwakọta, matte na-enwu gbaa ibu pigmenti eyeshadow palette
Anụ ọhịa ejirila ma na-adịte aka mee palette: suit maka oge dị iche iche, dị ka ọgbakọ nkịtị, ime ụlọ oriri na ọ salonụ ,ụ, oriri, agbamakwụkwọ. Ahụike na nchekwa dị mma yana oke mma. Enwere ike itinye ya na egbugbere ọnụ dị n'elu, ihu, ụkwụ na ahụ.
Nke mbụ:Ihe ngosi 15 eye eye eye bụ ihe nzuzo gị iji mepụta etemeete zuru oke. Eyechọ mma anya mara mma na-eme ka ị dịkwuo mma ma mara mma, ma nwee ike ime ka obi sie gị ike.
15 eyeshadow na-ewu ewu: iji 15 agba agba ewu ewu iji mepụta ọdịdị na-adịghị agwụ agwụ, dị jụụ na ịtụnanya. Ọ dị mfe ịkwado ma jikọta ya na creamy, velvety, soft and smooth pop colors for iche iche na oge ọkọchị gị niile.
Nwee mmetụta dị ichiiche dị ogologo oge: agba dị elu, agba na-adịgide adịgide, ọ naghị adị mfe idobe ma fee ntụ. Ọ nwere ike ịdịru otu ụbọchị iji nye gị ahụmịhe dị mma ma debe mkpuchi anya nke ọma.
Super coloration, nro na ire ụtọ: ude na agba na adụ ewu ewu na agba ike ọtụtụ ịtụnanya anya! Ahụike na nchekwa, ogo dị elu, mepụta anya zuru oke, nchikota agba na ezi uche dị na ya, na-eme ka anya dokwuo anya ma jupụta n'akụkụ atọ.
Onyunyo na-atụgharị uche: ọbara ọbara, na-enwu gbaa, champeenu, na ọlaedo nke na-agwakọta iji nye ntụgharị uche dị ukwuu, duo-chromatic shine, ị nwekwara ike iji ndò anyị naanị. Ọ bụ nguzozi mara mma nke dị jụụ ma sie ike.
Nke gara aga: Anya etemeete-BD9-C
Osote: Anya etemeete-BD15-oyi
JOYO © Ikike niile echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Ihe kacha mma, Obere lipstick, Anya Anya ọla edo, Matte Eyeshadow Palette, Kacha mma ude Eyeshadow, Shimmer Lipstick, Ngwa niile